पत्रुस – Word of Truth, Nepal
१. माछैमाछा – एक आश्चर्यकर्म (लूका ५:१-११)
लूका ५:८ मा उल्लेखित पत्रुसको भनाइको कारण के थियो होला? उनले आफूलाई किन त्यस्तो पापी मानिस भनी ठाने? के उनले हालै कसैको हत्या गरेका थिए? के उनले आफ्नो भाइ अन्द्रियासलाई तलाउमा डुबाउन खोजेका थिए? यशैया ६:५ मा यशैयाले किन “मलाई धिक्कार छ” भनी भने?
के तपाईंले पनि पवित्र परमेश्वरको सामु आफ्नो पापमय अवस्थालाई महसुस गर्नुभएको छ? के तपाईंले पुकारा गर्दै कहिल्यै यसरी भन्नुभएको छ, “प्रभु, म ज्यादै पापी छु। तपाईं कति महान् र पवित्र हुनुहुन्छ तर म कति पापी छु।”
येशूले पत्रुसलाई उनी बेग्लै खालको मछुवा हुनेछन् भनी भन्नुभयो: “अबदेखि उसो तिमीले _____________लाई ____________” (लूका ५:१०)। पत्रुस मानिसहरूका उत्कृष्ट मछुवा बनेका कुरा यस पाठमा अलि पछि सिक्नेछौं!
चौथो पहर (मत्ती १४:२५) भन्नाले बिहान ३ बजेदेखि ६ बजेसम्मको समय बुझिन्छ। घण्टौंदेखि चेलाहरू समुद्रमा आँधी-बेह्रीका बीच सङ्घर्ष गर्दै थिए। चेलाहरूले येशूलाई देख्‍नेबित्तिकै तिनीहरूले “यो ता _________ हो”” (मत्ती १४:२६) भनी भने। तिनीहरूले साँच्चीकै मान्छेलाई पानीमा हिँडेको कहिल्यै देखेका थिएनन्, त्यसैले तिनीहरूले यो एउटा भूत हुनुपर्दछ भनी ठाने!
उहाँको आज्ञा (पद २९,“”आऊ”) बदलिएको थिएन!
चेलाहरूसित कतिओटा हातहतियार थिए (लूका २२:३८)? __________। त्यसमध्ये एउटा तरवार कोसित थियो (यूहन्ना १८:१०)? ____________। के पत्रुसले आफ्नो तरवार चलाउन आतुर गरे? __________। पत्रुसको त्यस्तो प्रतिक्रियाको पछाडि के थियो, साहास कि डर? _________। पत्रुसको जोश ठूलो थियो, तर उनको निशानचाहिँ कस्तो थियो? ______________। पत्रुसको लक्ष्य त्यस व्यक्तिको कान काट्नु थियो होला कि सम्भवत: अन्य अङ्ग नै? _________________________। येशूले “कानको समस्या” लाई के गर्नुभयो (लूका २२:५१)? _________ _________________________________
ख्रीष्ट क्रूसमा मर्न नजानुभएको भए के तपाईंलाई कुनै फरक पर्नेथ्यो? ख्रीष्ट क्रूसमा नमर्नुभएको भए तपाईंले मुक्ति पाउने कुनै उपाय हुन्थ्यो? येशू क्रूसमा मर्न जानु किन नित्तान्त आवश्यक थियो (हेर्नुहोस्, मत्ती १६:२१-२२)? बास्तवमा येशूलाई स्वर्गदूतहरूको मद्दत पनि चाहिँदैनथ्यो। यूहन्ना १८:५-६ अनुसार येशूले “म उही हुँ” भनी घोषणा गर्नुहुँदा गिरफ्तार गर्न आउने सिङ्गो टोलीलाई के भयो? _____________ ____________________________। भनौं, येशूले तिनीहरूलाई “मरी जा!””भन्नुभएको भए तिनीहरू सबै मर्नेथिए। तर येशूलाई कुन कुराको बढी फिक्री थियो – आफैलाई बचाउन कि तपाईं र मलाई बचाउन? ______________________________________
एक दिन पत्रुसले जाल हान्दा ३००० लाई पक्रे। लूका ५:१० मा येशूले पत्रुसलाई उनले _________________ पक्रनेछन् भनी भन्नुभयो। प्रेरित अध्याय २ मा पत्रुसले यहूदीहरूको एक ठूलो जमातलाई प्रचार गरेको पाउँछौं। यहाँ पत्रुस ख्रीष्टदेखि लजाइरहेका छैनन्। उनले साहससाथ ती व्यक्तिहरूलाई प्रचार गरे, आफ्नो उदेकका प्रभु र मुक्तिदाताको विषयमा बताए (प्रेरित २:१४ देखिका पदहरू पढ्नुहोस्)। के उक्त सन्देश उनीहरूको हृदयमा छिर्न सक्यो (प्रेरित २:३७) _____________। योभन्दा अगाडि पत्रुसले आफ्नो फलामे तरवारले मान्छेको कान च्वाट्टै काटिदिएका थिए। अब पत्रुसले दुईधारे तरवारभन्दा पनि लाग्ने परमेश्वरको वचन (हिब्रु ४:१२) लाई प्रयोग गरी मानिसहरूका हृदयलाई छेड्न सके। पत्रुसका श्रोताहरूको “मुटु छेंडियो” अनि तिनीहरू कराए, “हामी के ___________?”” (प्रेरित २:३७)। तिनीहरूले के गर्नुपर्छ भनी पत्रुसले प्रेरित २:३८-४० मा बताइदिए। ठूलो सङ्ख्यामा मानिसहरूले उनीहरूलाई पत्रुसले भनेजस्तै गरे (प्रेरित २:४१)। त्यस दिन लगभग कतिजनाले मुक्ति पाए (प्रेरित २:४१)? _______________। त्यस दिन परमेश्वरले पत्रुसलाई ३००० मानिसहरू पक्रनलाई प्रयोग गर्नुभयो! उनी अब “मानिसहरूका ________________ बने” (मत्ती ४:१९)। वास्तवमा यो त शुरु मात्र थियो। पत्रुसले सुसमाचार प्रचार गर्ने काम सिध्याएका थिएनन्, उनले त शुरु मात्र गरेका थिए! उनी अझ धेरै पटक प्रचार गर्नेवाला थिए अनि अझ धेरै मानिसहरू पक्राउ पर्नेवाला थिए (प्रेरित ३:१२ देखिका पदहरूमा पत्रुसको अर्को प्रचार पढ्छौं)।
पत्रुस आए अनि ढोकामा ढकढक्याउन थाले। त्यस घरमा थुप्रै विश्वासीहरू परमेश्वरसित पत्रुस झ्यालखानाबाट छुटाइयोस् भनी प्रार्थना गर्दैथिए (प्रेरित १२:१२-१३)। के रोदाले पत्रुसलाई भित्र आउन दिइन् (प्रेरित १२:१४)? ____________। रोदाको घोषणा सुनेर विश्वासीहरूले के भने? के तिनीहरूले यसो भने, “प्रभुको स्तुति होस्! हाम्रो प्रार्थनाको जवाफ मिल्यो, पत्रुस छुटाइयो।”? ___________ (हेर्नुहोस् पद १५)। के तिनीहरूले रोदालाई विश्वास गरे? ___________। अन्तमा जब तिनीहरूले पत्रुसलाई देखे तब तिनीहरू ________ परे (पद १६)।
https://wordoftruth.com.np/wp-content/uploads/2021/06/logo-01-2-300x156.png00 Pradesh Shrestha https://wordoftruth.com.np/wp-content/uploads/2021/06/logo-01-2-300x156.png Pradesh Shrestha2020-02-04 17:58:342020-04-28 14:39:42पत्रुस